Sababtoo ah Waad Awoodi Kartaa ... | Martech Zone
Sababtoo ah waad awoodi kartaa…
Isniin, Maarso 31, 2008 Talaado, September 4, 2012 Douglas Karr
Dhowr sano ka hor markii Bluetooth uu ku dhacay suuqa, waxaa jiray guux ku saabsan warshadaha xayeysiinta. Sidee ayey u fiicnaan laheyd in xayeysiin lagu boodo taleefankaaga markaad ku dhowdahay badeecada, adeegga ama ganacsiga? Waxaan arkayaa xayeysiiyayaashu oo dhareraya hadda!
Kani waa sawir aan ka helay Goobta faylalka taas ayaa sharraxaysa nidaamka.
Maaddaama qof ku soo dhowaado meel u dhow xayeysiis, taleefanka gacanta ee adeegsadayaasha 'Bluetooth' ayaa soo saaraya farriin xayeysiis ah.
Layaab malahan xayeysiiyayaashu in ay kuusoo dhaweynayaan - waxaad leedahay afarta P ee suuqgeynta dhammaantood hal: wax soo saar, qiimo, dallacsiin iyo goob! IMHO, waxaad ka maqantahay 'P' cusub ee ugu muhiimsan suuq geynta, in kastoo… Ogolaansho!
Tirada xayaysiisyada ee celcelis ahaan Mareykanku arko maalin kasta ayaa isku qarxisay si xad dhaaf ah 3,000 oo farriin maalintii. Inbadan, dhab ahaantii, waxaan kudarney ereyo qaamuuskeena fariinta aan loo baahneyn - laga bilaabo emaylka oo hada si balaaran loogu aqbalay xayeysiin kasta oo faragelin ah - SPAM.
Mareykanku wuu jiran yahay waana daalan yahay. Waxaan ku qasabnay dawladeena inay wax ka qabato, abuurista Ha Wicin Diiwaanka iyo CAN-KA-QAADASHADA Wax ka qabato emaylka aan loo baahnayn. Tallaabada 'CAN-SPAM', si dhib leh, ayaa si fudud loo sameeyay spamming ka fudud ka spammers oo aad uga adag emaylka ogolaanshaha ku saleysan.
Jooji iimaylka! Jooji inaad ii soo wacdid casho! Jooji! Haddii aan doonayo badeecadaada ama adeeggaaga, waan ku heli doonaa! Waxaan kaa eegi doonaa khadka tooska ah. Waxaan weydiin doonaa asxaabteyda talooyin. Waan aqrin doonaa qoraallada adiga kugu saabsan.
Suuqgeynta Bluetooth horey ayey u soo baxday. Michael Katz wuxuu qalinka ku duugay weedha, Afduubka, oo sharraxaya dhaqanka tartankaaga oo kugu garaacaya farriin tartan ah inta aad ku dhowdahay tartanka. Hoog! Bal qiyaas ka iibso baabuur oo aad farriin uga hesho Bluetooth ka iibinta alaabada deriska ah oo kuu sheegaysa inaad isla markiiba la timaadid $ 500 oo kaash ah!
Xayeysiintu wax badan ayey u egtahay virus (siyaabo badan oo ka badan hal!). Maaddaama macaamilku uu marba marka ka dambeysa uu ku dhacayo fayras, awoodda ay u leeyihiin inay iska caabbiso fayraskaas ayaa sii kordheysa illaa ay aakhirka iska illoobayaan. Maaddaama xayeysiintu ay sii riixeyso, macaamiisha ayaa noqda kuwo iska caabiya iyaga. Sii wad ka dib farsamooyin xayeysiin fara badan oo fara badan oo waxaad kaliya dhaawici doontaa naftaada - iyo warshadaha.
Maxay dadku u sameyn lahaayeen markaa? Maxaa yeelay way shaqaysaa! Kumanaan qof oo aad u diri karto farriinta $ 1,000, 500 ayaa ka jawaabi kara. ROI-da taas oo loogu talagalay riixitaanka fariinta Bluetooth waxay ku jirtaa kumanaan boqolkiiba. Dadka aad runti cadhooteenna sinaba kaaama iibsan doonaan, haddaba yaa dan ka leh?
Dhibaatadu waxay tahay in tani ay tahay suuq-geyn aragti gaaban ka dib natiijooyin deg-deg ah oo aan lahayn istiraatiijiyad muddada-dheer ah. Khasaaraha aad sameyneyso way adagtahay in la qiyaaso maxaa yeelay waxay kaliya saameyn ku yeelaneysaa natiijooyin aad uga sii fog wadada. Waqtigaas ka dib, VP-gaaga ee Suuqgeynta ama Xayeysiinta ayaa laga yaabaa inay muddo dheer dhaaftay oo dhuuqeyso ganacsigooda xiga.
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah haddii aadan siinin 'P' shanaad - Ogolaansho - xoogaa fiiro gaar ah, waxaad ubaahantahay inaad waxyeello weyn u geysato suuqgeynta muddada-dheer. Si kale haddii loo dhigo, sababtoo ah waxaad isticmaali kartaa tikniyoolajiyad riix sida tan oo kale, macnaheedu maahan inaad sameysay.
Xitaa waan tegayaa oo waxaan idhaahdaa kani waa nooca xayeysiinta ee ka soo ifbaxay teknolojiyadda, oo taa beddelkeeda ma ahan. Aasaasayaashii Bluetooth ma fadhiyin hal maalin oo waxay dhahayeen, "Ninyahow, tolow ma jirtaa waddo aan ugu riixno xayeysiinta taleefanka gacanta marka uu qofku ag marayo!".
Tags: xayeysiintaBluetoothsuuq geynta Bluetoothdhawaanshaha Bluetoothsuuq geynta bluetoothsuuq u dhowaanshaha
Qaado Gundhig! Isku Xidhka Nusqaamaha Tiknoolajiyadda Suuqgeynta
Kaliya waa tusaalaha caadiga ah ee sida dadka intiisa badani waqti aad u dheer ugu qaataan ka fikirida sida ay u soo saari karaan qiimaha halkii baloog jira oo loo xukumi lahaa qof kale, halkii ay ku duri lahaayeen qiime ku saleysan waxa dadka kale runti doonayaan.
Dadku had iyo jeer way sidan sameeyeen laakiin maalmo kahor intarneedka marwalba kuxiran kamay muuqan. Hadda maxaa yeelay wax yar ayey ku kacaysaa in lagu soo rogo rabitaanka qofka inuu soo saaro qiimaha dad aad u tiro badan oo aan gaarnay heer aan, haddii ay wax iska beddelaan mooyee. waxaan dhamaanteen ku jiri doonnaa culeys joogto ah oo aad u cakiran oo ay wax u burburayaan siyaabo aynaan xitaa qiyaasi karin.
OTOH, waana tan rajadayda, in dadku bilaabaan inay ogaadaan in kaliya qiimeynta cirbadeynta aysan siinaynin karma wanaagsan, sidoo kale waxay iyaga ka heli doontaa inay si aad u wanaagsan uga soo laabtaan muddada dheer. Dadku dhab ahaan ma noqon doonaan kuwa la iftiimiyay? Waqtiga kaliya ayaa sheegi doona…
BTW, waxaan qabtay kulan ku saabsan Kireynta Khadka Tooska ah at Ganacsatada Webka Atlanta iyo isku raacsanaanta kaqeybgalayaasha ee ku saabsan xayeysiinta riixitaanka ayaa si weyn u dhacday "Miyaadan xitaa ahayn qabaa ku saabsan, ama waxaan ku dhammeeyaa inaan ku dhufto aaladda moobilkeyga meel fog, meel fog oo aad runtii dhab ahaan u jeclaan lahayd halkii laga ahaan lahaa”Ama wax la mid ah. 😉
Apr 1, 2008 at 6: 53 PM
Nooca xeeladaha suuqgeynta ee kuu dammaanad qaadaya inaad ka fogaato saamiga weyn ee suuqaaga bartilmaameedka oo kugu filan inaad naftaada ka saarto ganacsiga.
Apr 2, 2008 at 8: 37 AM
Boostada sida tooska ah, waxaa badanaa la i weydiiyaa haddii waxyaabaha sida emaylka, iyo hadda oo aan qoraal u diro, ay waxyeello u geysteen boostada tooska ah. Ma leh Haddii ay wax jiraan, waxay ka dhigeysaa mid caan ah, sababtoo ah dad badan ayaa runtii wali jecel inay helaan macluumaadka badeecadda cusub iyo biilasha boostada, halkii ay ka ahaan lahaayeen emayl.
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku nahay dhif warshadaha tooska ah, sababtoo ah waxaan runtii ku dhiirrigelinnaa dadka inay yareeyaan qadarka farriinta tooska ah ee ay diraan. Ma doonayo in dad wax badan u diraan dad badan oo aan rabin inay helaan; Waxaan rabaa inay u diraan wax kayar dadka ay u badan tahay inay wax iibsadaan, aad u xiiseeyaan inay ka maqlaan iyaga, isla markaana ay u dhowdahay inay ku ridaan baqshadooda iyadoon la eegin.
Waxaan kaloo wax ka qoray ha ugu yeedhin liisaska liiska blog aniga ii gaar ah
Apr 2, 2008 at 1: 11 PM
Waxaan la yaabanahay aragtida gaaban ee maqaalkan iyo faallooyinka badankood. Maya, dadka wanaagsan ee Bluetooth ma fadhiyin hareeraha iyagoo isku dayaya inay dejiyaan habab kale oo xayeysiin ah markay abuurayaan wax soo saarkooda. Laakiin haddana waxaan hubaa in hal-abuurayaasha telefishanka iyo idaacaddu isku dayayaan inay sidoo kale sameeyaan. Haddana si uun, tobanaan sano ka dib, waa warbaahin si ballaadhan loo oggol yahay suuqgeynta.
Hadaad runti ka fikirto, suuq geynta Bluetooth-ka ayaa ka fasax badan TV-ga, raadiyaha, iyo daabacaadda. Ma lihid ikhtiyaar inta badan markaad daawaneysid xayeysiisyada ka imanaya warbaahinta waaweyn, laakiin aalad kasta oo Bluetooth ah oo meeshaas ku taal waxay kuu soo jeedin doontaa inaad oggolaato ka hor intaadan helin wax nuxur ah (sida sawirkaagu si cad u tilmaamayo). Oo ka waran hadaadan rabin in lagaa codsado haba yaraatee? Wanaagsan! Si fudud u jooji Bluetooth qalabkaaga, ama u dejiso? Aan la arki karin? hab.
Hadda waxaan wada ognahay in warbaahinta waawayn ay tahay warshad jirran iyo / ama dhimanaya, waxaanan ku raacsanahay qiimayntaada ku saabsan xayeysiintu inay tahay sida fayraska oo kale. Dadku way ku jiran yihiin inay arkaan farriimo doqon ah oo ka yimaada shirkado ay xiiseynayaan? oo hadda ku jira moobilkeyga? Xadgudub! Laakiin halkee ayaan joogi lahayn haddii aan u oggolaanno fikradaha hore inay dilaan kuwa cusub? Dabcan dooni meyno xayeysiisyo dhaqameed oo ku saabsan moobilkeenna. Taasi waxay ku samayn lahayd dhexdhexaadiyahan cusub wixii ay ku sameeyeen kuwii hore. Laakiin haddii aan u diro cod-dhawaaq, ficil-celin, ama shaashad qabow? pssh hubso, igu xir. Taasi waa qaybta ugu weyn ee ku saabsan teknoolojiyadaan cusub: xulashooyinka ku saabsan waxyaabaha ku jira waa kuwo aan xad lahayn. Sida uu tilmaamay Mike Schinkel, warshadahaani waxay u baahan yihiin oo kaliya in wax laga baro sida loo duro qiimaha. Haddii suuqleyda ay taas maskaxda ku hayaan oo ay u qaybiyaan waxyaabaha ku lug leh iyo is-dhexgalka, ma ahan oo keliya 10% off coupon ah oo loogu talagalay Starbucks, markaa shaqadooda ayey qabanayaan. Haddii arrimuhu ahaadaan kuwo ku habboon oo xiiso leh, waxaan u maleynayaa inay wax u tari doonaan warshadooda iyo shirkaddooda, oo aaney dhaawaceynin.
Aug 21, 2008 at 10: 39 AM
Haye, waxaan hadda isticmaalayay AreaBluetooth Light oo aragti guud ayaan ka haystay barnaamijka. Waxaan isticmaalayaa demo vesion laakiin waxaan tixgelinayaa inaan iibsado ruqsadda $ 99.
Waxay waliba iiga heleen 25% kuuboon qiimo dhimis ah oo loogu talagalay ka-bixitaanka Google? Blue4less?
Wixii macluumaad dheeraad ah boggooda ayaa ah http://www.areabluetooth.com/en/
Jan 18, 2009 saacadu markay ahayd 12:56 PM
Waxaan abuuray qoraal ku saabsan 6 'P's ee suuq geynta bluetooth-ka qayb ahaan waxaa dhiirrigeliyay qoraalkan. Waxaan dareemayaa in daloolku u dhowyahay aqrin macno leh inaad u baahan tahay inaad u fuliso olole kasta si sax ah oo waafaqsan habka ugu fiican.
Khibrad ahaan waxaan ka helay 'P' ugu muhiimsan ololayaasha wakiillada inay noqdaan kuwa ballan qaada. Waxaan siiyay tirooyin muujinaya tan.